भविष्यमा पढेर सि.ए बन्ने इच्छा छ : रिजाल – Enayanepal.com
भविष्यमा पढेर सि.ए बन्ने इच्छा छ : रिजाल
२०७३, २९ भाद्र बुधबार मा प्रकाशित
विधार्थी सँग एकछिन ……..
हरेक विद्यार्थीका आ— आफनै चाहाना हुन्छन । सबै विद्यार्थीहरुलाई एउटै किसिमको वातावरण मन पदैन । विद्यालयको वातावरण विद्यार्थीको मनोविज्ञान र अभिभावकको आफना सन्तानप्रति दर्शाउने अभिभावकत्व जस्ता विषयमा हामीले विद्यार्थीसँगै केही विद्यार्थी केन्द्रित प्रशनहरु तेस्याउँछौ ।
केही समय विद्यार्थीसँग बसेर आम विद्यार्थीको प्रतिनिभित्व गर्ने पात्रका बारेमा कुरा गर्ने गर्दछौ । हामीले यसपटक धेरै विद्यार्थीको प्रतिनीधि पात्रका रुपमा उषा बालबाटिक उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा ९ मा अध्ययनरत छात्रा भगवती रिजाललाई भेटाएका छौ ।
प्रस्तुत छ रिजालसँग ईनयाँनेपाल कर्मी नरजन तामाङ्ले गरेको कुराकानीको संक्षेप :
 कस्तो चल्दैछ पढाई ?
ठिकै चलिराखेको छ ।
 पढाई कस्तो भईदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ?
पढाई सैदान्तिक भन्दा अभ्यास बढि भई दिएको भए हुन्थ्यो ।
 घरमा कतिको पढनु हुन्छ नि ?
ठिकै पढिन्छ परिक्षा आएको बेला अलि बढि पढछु ।
 अहिले उषा बालबाटिक उच्च माध्यामिक विद्यालयको जुन वातारण छ यो वातारण पढाईको लागि कस्तो लाग्छ नि ?
ठिकै छ आफनो विद्यालयको पढाई सबैलाई राम्रै लाग्छ ।
 कुन शिक्षकले पढाएको तपाईलाई राम्रो सँग बुझे जस्तो लाग्छ ?
सबै शिक्षक शिक्षिकाहरुले रामैसँग पढाउनु हुन्छ मलाई सामाजिक विषयका शिक्षक किरण बस्नेतले पढाएको राम्रो बुझिन्थ्यो अहिले उहाँले पढाउनु हुदैन ।
 तपाई भविष्यमा के बन्न चाहानुहुन्छ ?
म पढेर भविष्यमा पढेर सि. ए बन्ने इच्छा छ ।
 तपाईको कक्षामा कति जना विद्यार्थी हुनुहुन्छ तपाई धेरै जनाको बीचमा पढाएको बुझनु हुन्छ ?
मेरो कक्षामा ९८ जना विद्यार्थीहरु छन । मेरो सेक्सनमा ३३ जना छन । ध्यान दिएर सुनेपछि बुझिन्छ ।
 तपाई अगाडी बसेर पढिरहदा तपाईको सार्थीहरुले पछाडीबाट डिस्टर्ब गर्दा कस्तो लग्छ ?
पढिरहेको बेला हल्ला गरेमा मलाई सारै रिस उठछ । हल्ला नगर्ने सुझाव दिन्छु ।
 तपाईलाई तपाईको विद्यालयका मन नपर्ने पक्षहरु के के हुन ?
विद्यालयमा कुनै पनि क्रियाकलाप हुनु भन्दा पहिले जानकारी हुदैन ।
 तपाईका विद्यालयको राम्रा पक्षहरु के-के हुन ?
सुविधायुक्त खानेपानी छ । शौचालयहरु धेरै छन । शिक्षकहरु राम्रा छन । सुर्खेतको उत्कृष्ठ विद्यालय पनि हो कुनै तालिमहरुमा भाग लिने अवसर दिनुहुन्छ । पत्रकारिता सम्बन्धि तालिम पनि दिने कुरा छ । विद्यार्थीहरुले आफै आत्मा निर्भर होस भन्ने चाहाना भएको विद्यालय हो ।
कानुनको खिल्ली उडाउँदै चामुण्डाविन्द्रासैनी, गैरकानुनी रुपमा ४ जना सल्लाहकार नियुक्ति
कर्णालीकी मन्त्री केसीको बजेट सक्ने काइदा : कानूनबाहिर गएर धमाधम कार्यविधि निर्माण !
नेता, गणतन्त्र र हाम्रो गन्तव्य